Sirama Nosy Be sy Brickaville: tsy anjaran’ny orinasa Sasm ny manefa ny trosa tany aloha | NewsMada
Sirama Nosy Be sy Brickaville: tsy anjaran’ny orinasa Sasm ny manefa ny trosa tany aloha
Mitondra fanazavana ny orinasa Vidzar, momba ny ny Sirama Nosy Be sy Brickaville, resabe tato ho ato. Ny Vidzar no nahazo ny tolobidy, ny taona 2015, ary nifanaraka ny roa tonta fa hanangana orinasa vaovao Sasm (Société agricole et sucrière de Madagascar). Tsy nihodina intsony ny Sirama Nosy Be nanomboka ny taona 2006, sy any Brickaville, ny taona 2007. Toy ny orinasam-panjakana maro ratsy fitantanana, betsaka ny fatiantoka vokatr’izany eo amin’ny toekarem-pirenena. Nisian’ny marimaritra iraisana ho fanarenana ny orinasa ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina, antony nananganana orinasa vaovao, ny Sasm, ka 70 % amin’ny vola miasa ny an’ny Vidzar ary 30 % ny an’ny Sirama na an’ny fanjakana.
Voarakitra ao anatin’ny fifanarahana ny fanoloran’ny Sirama ny orinasa mpanodina fary sy ny tany volena fary. Tsy ho fananan’ny Sasm akory fa hiasana. Ary adidin’ny Sasm kosa ny manavao ny orinasa efa tsy nihodina taona maro, sy ny manajary ny tany volena fary, akora fototra ilaina. Voalaza mazava koa fa tsy anjaran’ny Sasm, amina maha orinasa vaovao azy, ny manefa ny karaman’ny mpiasan’ny Sirama na trosa hafa tsy voaloa tany aloha.
Fantatra anefa fa nisy ampahan-tany 694 ha tapaka fa hamidy tamin’ny 2012, ary efa lafo raha ny vaovao avy any an-toerana, tokony ho nandoavana ny karaman’ny mpiasa, saingy tsy voavaha ny olana hatramin’izao. Betsaka ny taratasin-tany (titre) tsy hita efa nisy naka, na nisy nivarotra. Raha noheverina ho vita tamin’ny 2018 ny asa fanarenana, maro amin’ireo mpiasan’ny Sirama ireo ihany no afaka manohy ny asany ao amin’ny Sasm, noho ny fananan’izy ireo traikefa.
Naharesy tamin’ny fitsarana ny Sasm
Teo anelanelan’ny 2015-2018, nisy ny asa fanarenana natomboka fa ny volana jolay 2018, nitokona tsy navelan’ireo mpiasan’ny Sirama Nosy Be nidiran’ny Sasm ny faritra misy ny ozinina. Nitaky karama tsy voaloa izy ireo. Nanome rariny ny Sasm ny fitsarana tamin’ny septambra 2018, hamela azy hanohy ny asany, saingy tsy hita ny fampiharana izany didim-pitsarana izany. Toa nitazam-potsiny ny minisiteran’ny Indostria.
Ny any Brickaville indray, nandefasana fiara vaventy maro nitondra fitaovana isan-karazany hanamboarana ny orinasa, nefa tsy navela niditra ireo fiara vaventy ireo. Vola mivoaka daholo anefa izany satria tsy maintsy aloa ny vidin’entana sy ny saram-pitaterana. Izao ny endrika iray ny tsy fiarovana orinasa malagasy, raha mba te hanao zavatra.